2GB OST Olana amin'ny rakitra. Oversized OST Olana amin'ny rakitra.
Home Products DataNumen Exchange Recovery Oversized OST Olana amin'ny rakitra
Fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny Oversized OST Olana amin'ny rakitra
Inona no atao hoe Oversized OST Olana amin'ny rakitra?
Ny Microsoft Outlook 2002 sy ny kinova ambany dia mametra ny haben'ny fampirimana ivelan'ny seranana (OST) rakitra amin'ny 2GB. Rehefa mahatratra na mihoatra an'io fetra io ilay rakitra, dia hahita iray na maromaro amin'ireto lesoka manaraka ireto ianao:
Cannot open or load the OST apetrakao daholo.
Tsy afaka manampy tahirin-kevitra vaovao amin'ny OST hametraka.
Tsy afaka fampifanarahana ny OST fisie miaraka amin'ny mpizara Exchange.
See various error messages during the synchronization process.
Io no antsoina hoe be loatra OST olan'ny rakitra.
Microsoft Outlook sy Exchange dia tsy manana fiasa ao anatiny hamonjy ireo be loatra OST file. Microsoft only released several service packs so that when the OST Ny haben'ny rakitra dia manakaiky ny fetra 2GB, i Outlook dia haneho hafatra diso ary tsy hanaiky data vaovao intsony. Ity rafitra ity, amin'ny lafiny iray, dia afaka misoroka ny OST fisie noho ny be loatra. Fa rehefa tratra ny fetra, dia tsy afaka manao na inona na inona amin'ny OST fisie, toy ny mandefa / mandray mailaka, manendry fotoana, manoratra naoty, fampifanarahana, sns., raha tsy hoe esorinao ny rakitra marobe ao amin'ny OST ataovy ary ampifanaraho aminy avy eo mba hampihenana ny habeny ho latsaky ny 2GB. Tena tsy maninona izany raha ny angona ao OST mitombo hatrany ny rakitra.
Hatramin'ny Microsoft Outlook 2003, vaovao OST Ampidirina ny endrika fisie, izay manohana ny Unicode ary tsy manana fetra 2GB intsony. Noho izany, raha mampiasa Microsoft Outlook 2003 sy dikan-teny avo kokoa ianao, ary ny OST Ny rakitra dia noforonina tamin'ny endrika Unicode vaovao, avy eo tsy mila miahiahy momba ny olana mihabe loatra ianao.
1. Rehefa manandrana maka entana be loatra ianao OST rakitra, dia hahita hafatra diso ianao, toy ny:
Hita ny lesoka tao amin'ilay rakitra xxxx.ost. Atsaharo ny rindranasa alefa mailaka rehetra, ary avy eo ampiasao ny fitaovana fanamboarana Inbox.
aiza 'xxxx.ost'no anaran'ny OST rakitra hapetraka.
2. Rehefa manandrana manampy hafatra vaovao ianao na zavatra hafa ao amin'ilay OST rakitra, amin'ny alàlan'ny fampifanarahana na amin'ny asa hafa, ary mandritra ny fizotrany, ny OST Nahatratra na nihoatra ny 2GB ny rakitra, ho hitanao ny fijanonan'ny Outlook fotsiny tsy hanaiky data vaovao tsy misy fitarainana, na hahita hafatra diso ianao, toy ny:
Diso notaterin'ny Task 'Microsoft Exchange Server' (0x00040820): 'lesoka amin'ny fampifanarahana aoriana. Ao amin'ny most tranga, misy fampahalalana bebe kokoa amin'ny log fampitahana ao amin'ny fampirimana ireo entana voafafa. '
Errors in background synchronization. In most tranga, fampahalalana bebe kokoa azo alaina amin'ny log fampitahana ao amin'ny fampirimana ireo entana voafafa.
Can’t copy the item.
Araka ny voalaza tetsy ambony, Microsoft dia tsy manana fomba mahafa-po hamahana ireo be loatra OST olan'ny rakitra. Ny vahaolana tsara indrindra dia ny vokatray DataNumen Exchange Recovery. Izy io dia afaka mamerina ilay be loatra OST mametraka rakitra mora sy mahomby. Mba hanaovana izany dia misy fomba roa hafa:
Raha manana Outlook 2003 na kinova ambonimbony napetraka ao amin'ny solo-sainanao ianao dia afaka manao izany ovay ny be loatra OST apetraho ao anaty rakitra PST ao amin'ny endrika unicode Outlook 2003 vaovao, izay tsy manana fetra 2GB intsony. Ity no fomba tiany.
If you only have Outlook XNUMX or lower versions installed, then you can zarao ny habe OST ataovy anaty rakitra PST maromaro kokoa. Ny rakitra PST tsirairay dia misy ampahany amin'ny angona amin'ny tany am-boalohany OST fisie, saingy latsaky ny 2GB ary tsy miankina amin'izy samy izy mba hahafahanao miditra ao aminy misaraka amin'ny Outlook 2002 na kinova ambany. Ity fomba ity dia somary manelingelina ihany satria mila mitantana rakitra PST marobe aorian'ny fiasan'ny fisarahana. Ary mbola mila miatrika ny olana amin'ny headachy be loatra ianao rehefa misy rakitra PST mahatratra 2GB any aoriana.